अब १४ मन्त्रालय मात्र, कुन मन्त्रालय कहाँ गाभिए ? (सूचीसहित) - SangaloKhabar
अब १४ मन्त्रालय मात्र, कुन मन्त्रालय कहाँ गाभिए ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयनसँगै अहिले ठूला भनिएका स्थानीय विकास, शिक्षा मन्त्रालय, शान्ति पुनर्निर्माण लगायतका मन्त्रालयहरु खारेज हुने भएका छन् ।
यस्तै उपसमितिले राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र संविधानमा व्यवस्था भएका विभिन्न १३ वटा संवैैधानिक आयोगलाई यथावत राख्ने प्रस्ताव गरेको हो । यस्तै भाषा आयोगलाई पनि निरन्तरता दिने उपसमितिको प्रस्ताव छ । अनलाईनखबर
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र ०९, २०७३ समय: २२:५२:०२